FAAYIDAA DUBBISUU-Dhalli namaa maaliif kitaabota dubbisuu qaba kan jedhuuf fallisaa kunooti. – Beekan Guluma Erena
FAAYIDAA DUBBISUU-Dhalli namaa maaliif kitaabota dubbisuu qaba kan jedhuuf fallisaa kunooti.	Beekan Guluma Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Education April 24, 2016January 21, 2017BEEKAN GULUMMAA IRRANAA, Oromo Revolution
652SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
F A A Y I D A A D U B B I S U U!!
…..jedha uummanni naannoon ani itti dhaladhee yeroo Nafxanyaa naannoosaa qubatte qeequ.,…..
Dubbisuun jireenya. Barataa, daldalaa, qotee bulaa, jaarsa, oogganaa siyaasaafi amantiilee taanus hindubbinu taanaan akki itti addunyaa kana ilaaalluufi injifachuu dandeenyu baay’ee gadi bu’aa ta’a. Namni hindubbine yeroo baay’ee nama hamataafi odeessituu ta’uusaa argitu. Kun mallattoo nama barruuwwan garaagaraa hindubbineeti!!Egaa dubbisuun jireenya kan jennuuf, jiruufi jireenya dhala namaa keessatti dubbisuun iddoo ol aanaa qaba jechuudha. Namnis hanguma dubbise jiraata. Amaleeffannaa biyyoota ambaa keessatti dubbisuun akka aadaatti ilaalama. Kanaafuu har’a dubbisaa bor geggeessaa (to day reader tomorrow a leader) jedhu. Dubbisuun Ogummaawwan barbaachisoo bu’aa qabeessummaa egeree dhala namaa murteessanidha. Barattoonni barruuwwan hin beekne gargaarsa malee, saffisa barbaachisaa ta’een dubbisanii, muuxannoo barbaachisaa akka irraa argataniif waa’ee dubbisuu beekuu qabu. Keessumattuu sabni Oromoo aadaa dubbisuu horatee dararama sabasaarra kaleessa tureef har’a deebii kennuuf kitaabota addunyaarratti barreeffamanii jiran hedduu isaanii sakatta’anii kan dhuunfaasaa barreessuutu isarraa eegama.
Sammuun hindubbisne akka kuufama bishaanii iddoo tokko ciisee ajaa’uuti!!–
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa652SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DHIBEE QAAMA SAALAA
BEEKAN GULUMA INTERVIEW 2010 →